‘अब नेपाली सिमेन्ट विदेश निर्यात... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, मंसिर ११
नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । क्लिंकरमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर नजिक पुगेको छ। नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी पनि धमाधम भित्रिरहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा सिमेन्टको बजार कस्तो छ ? विदेशी लगानीका सिमेन्टले प्रतिस्पर्धा कसरी बढाइरहेको छ ? नेपाले कहिले सिमेन्ट विदेश निर्यात गर्न सक्छ आदि विषयमा सेतोपाटीले अर्घाखाँची सिमेन्टका सहायक महा प्रवन्धक रमेश थापा सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अशं:
अहिले नेपालमा सिमेन्ट बजारको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले बजारमा सिमेन्टको माग भन्दा पूर्ति बढी छ । मानिसले घर बनाउने क्षमता घट्यो वा भूँइचालोपछि तिब्र भएको घर निमार्णको काम सकियो।अहिले घर निमार्ण सुस्ताएको छ । सरकारी नियम, कर र बैंकको कर्जा सुविधाको कारणले पनि अहिले नयाँ घर निमार्णको क्रम केही सुस्त देखिएको छ ।
केही समय अघि पोखराबाट रिपोर्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो एक जना साथीले गत वर्षको भन्दा निकै कमले मात्रै नयाँ घर बनाउन चासो देखाउनुभएको छ। अहिले व्याक्तिगत घर मात्रै होइन सरकारले गर्ने विकास निमार्णका काममा पनि कम भएको छ । बजारमा पैसा चलायमान नै भएको छैन ।
काम गर्नेहरु पनि काम नपाएर बसिरहेका छन् । यो सबै हेर्दा अहिले सिमेन्टसँगै निमार्ण सामाग्रीको बजार सुस्त छ ।
निमार्णको काम नै कम भयो कि बजारमा सिमेन्ट कम्पनी धेरै भएर यस्तो अवस्था आयो ?
अहिले बजारमा धेरै सिमेन्ट कम्पनी आएपछि धेरै उत्पादन भयो त्यो सत्य हो । तर विकासोउन्मुख देशमा निमार्ण गर्नुपर्ने पुर्वाधार धेरै हुन्छन् । हामीले सुरुङमार्गको कुरा गरिरहेका छौं, नयाँ सडक निमार्ण र विस्तारको चर्चा छ, जलविद्युतको कुरा पनि उस्तै छ यी सबै काम पाइपलाइनमा छन् । योसँगै भूकम्पले असर गरेको असन, इन्द्र चोकका गल्लीहरुको पुनर्निमाण गर्दा अहिलेको उत्पादन धेरै होइन ।
नेपालमा पछिल्लो समय बजार राम्रो देखेर नै लगानी बढेको हो । भूकम्प लगत्तै बजार पनि राम्रो थियो । तर अहिले भूकम्पले भत्काएका मुख्य क्षेत्रमा काम नहुने र नयाँ कुनै पनि परियोजनाहरु सञ्चालन नहुँदा उत्पादिन सिमेन्ट धेरै भएको हो कि भन्ने अनुभुती भइरहेको छ ।
सिमेन्टको प्रतिस्पर्धा बढेको छ। यसको लाभ उपभोक्ताले मूल्यमामा के पाएका छन?
यो अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो । पूर्ति भन्दा माग कम भएपछि मुल्य घट्छ । त्यसो त अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सिमेन्टको मूल्य घटिरहेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो एक वर्ष देखि मूल्य लगातार घटिरहेको छ । र यो अहिलेनै बढ्ने सम्भावना पनि देखिदैन । त्यसैले उपभोक्ताले यसबाट राम्रै लाभ पाएका छन्।
हामी क्लिंकरमा कहिले आत्मनिर्भर हुने ?
अहिले नै हामी पूर्ण रुपमा नभए पनि धेरै मात्रामा आफै क्लिंकर उत्पादन गर्न थालिसकेका छौं । भारतबाट क्लिंकर ल्याएर चलिरहेको सिमेन्ट उद्योग निकै कम छन् । अर्घखाँची सिमेन्टले पनि अहिले नेपाली क्लिंकर नै प्रयोग गर्छ ।
अहिले सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी पनि भित्रिरहेको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
ठूलो मात्रामा विदेशी लगानीमा सिमेन्ट उद्योगमा भित्रिएको छैन । केही कम्पनीहरु आएका छन् । त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । त्यसले स्वदेशी लगानीका उद्योगमा उत्पादन विस्तार गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।
अहिले नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा चिनियाँ लगानीमा कम्पनी खोल्ने चर्चा छ । त्यसले अझै धेरै पूर्ति बढाउछ । त्यसको लागि हामीले सिमेन्ट खपत धेरै हुने विकास निमार्णका कामलाई तिब्रता दिनु जरुरी छ ।
हाम्रोमा सिमेन्ट उत्पादन बढ्यो भने विदेश निर्यात गर्न सकिदैन ?
सकिन्छ । तर यो व्यावसायीले मात्रै सोचेर हुने कुरा होइन त्यसको लागि सरकारनै गर्नुपर्छ । निर्यात गर्ने भनेपछि भन्सारको कुरा हुन्छ त्यसका लागि सरकारले निर्यात नीति बनाउनु पर्छ ।
आफ्नै क्लिंकर आफै उत्पादन गरेर अझै ठूलो मात्रामा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छौ । र अर्को वर्ष सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौ । त्यसका लागि नीतिगत र व्यवाहरिक कठीनाइ भने हुनु भएन ।
नेपालको सिमेन्टको बजार भनेको भारत हो । भारतको बिहार वा उत्तरप्रदेशमा राजस्थानबाट सिमेन्ट आउछ । त्यहाँ राजस्थानको भन्दा सस्तो ढुवानीमा सिमेन्ट दिन सक्ने गरि नेपाल सरकार र भारत सरकारको बीचमा सम्झौता भयो भने निर्यातको सम्भावना हुन्छ ।
हामीसँग विदेश निर्यात गर्नको लागि मूल्य, भाडा र करको कुरा मुख्य चुनौति हुन् । यो तीन कुरा सहज भयो भने नेपलबाट सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ ।
सिमेन्टको ग्रेड भनेको के हो ?
बजारमा तीन ग्रेडको सिमेन्ट हुन्छन्, ३३, ४३ र ५३ ग्रेड । यो सिमेन्टको भार बहन गर्न सक्ने क्षमता हो ।
सिमेन्टको भार बहन क्षमता तीन दिन, सात दिन र २८ दिन गरी तीन चरणमा मापन गरिन्छ । २८ दिनको क्षमता मापन गरेपछि सिमेन्टको भार थेग्न सक्ने क्षमता कति हो भनेर थाहा हुन्छ । त्यसैको आधारमा ग्रेड दिइन्छ ।
सबैभन्दा बढी ग्रेड जसको छ त्यो नै राम्रो सिमेन्ट हो । ५३ ग्रेडको सिमेन्ट सबैभन्दा राम्रो क्वालिटीको सिमेन्ट हो ।
राम्रो सिमेन्ट कसरी थाहाँ पाउने ?
पहिलो कुरा त सिमेन्टको गुणस्तर त्यसको ग्रेडले देखाउने भयो । त्यसपछि उत्पादन गरेको लामो समय भयो भने पनि सिमेन्टको क्वालीटी घट्दै गइरहेको हुन्छ । त्यसैले अहिले सरकारले नै सिमेन्टको बोरामा उत्पादन मिती लेखेर उत्पादन भएको तीन महिना भित्र प्रयोग गरिसक्नु पर्ने भनेको छ । फ्रेस सिमेन्ट प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ ।
उपभोक्तहरुले कम्पनीसँग बुझेर सिमेन्टको मिश्रण हेरेर पनि किन्न सक्छन् ।
अहिले धेरै स्थानीय तहमा इन्जिनियरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग पनि के कामको लागि कस्तो सिमेन्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह गर्न सकिन्छ ।
तर सामान्य ठेकेदारले भने परम्परागत रुपमा पहिले जुन सिमेन्ट प्रयोग भएको थियो अहिले पनि त्यो नै सिमेन्ट सिफारीस गर्ने गरेको भेटिन्छ । तर सिमेन्टको मिश्रण हेरेर किन्नुपर्छ ।
राम्रो सिमेन्ट छान्ने अर्को आधार फाइननेस पनि हो । फाइननेस सिमेन्टको गुणस्तर राम्रो हुन्छ ।
बेला बेलामा बन्दा–बन्दै भत्किएका पुल वा अत्य भवनको समाचार सुनिन्छ । यसरी बन्दा–बन्दै भत्कीनुमा सिमेन्टको गुणस्तरको भुमिका कति हुन्छ ?
सिमेन्ट उत्पादकको हिसाबले भन्दा यो पुर्वग्रही जस्तो लाग्नसक्छ तर, यसमा सिमेन्टको भुमिका हुदैन । कुनै प्रविधिकसँग जानकारी लिँदा पनि हुन्छ । सिमेन्टको काम गिट्टी बालुवा र रडलाई जोडेर कंक्रिट बनाउने हो ।
यसरी पुल बनाउँदा त्यहाँ रडको क्वालिटी मिलेन भने भत्किन्छ । इन्जिनियरिङ गलत भयो भने भत्किने सम्भावना हुन्छ ।
ढलान गरेको वा निमार्ण गरेको ७ दिनसम्म सेट भएन भने त्यो बेलामा सिमेन्टको गुणस्तर राम्रो भएन भन्ने प्रश्न उठ्छ । निमार्णका क्रममा बालुवा, गिट्टी राम्रो र साबुन नमिस्सीएको पानी हुनुपर्छ । यसले पनि सिमेन्टको गुणस्तर विगार्छ ।
हामीले कपडा धोएको पानी निमार्णमा प्रयोग गर्दा त्यसले सिमेन्टको गुणस्तर कम गर्छ तर सिमेन्टलेनै गर्दा निमार्ण हुँदाहुँदै भत्केको भन्ने चाँही सुनेको छैन ।
सिमेन्टको उत्पादकको अहिलेको चुनौति के हो?
हामी विकास निमार्णको कुरा गरौ वा निजी घर बनाउने कुरा गरौ यो सबै जिवनमा एक पटक गर्ने हो, त्यसैल गुणस्तरमा सम्झौता गर्न सकिदैन ।
हामी गुणस्तरिय सामान बेच्दा बढी मूल्य राख्नु पर्दा पनि समस्या हुँदैन । क्वालिटिमा सम्झौता गरेर रेट घटाउन हामी दिँदैनौ । हाम्रो पहिलो प्रथमिकता गुणस्तर हो अनि मात्रै मूल्य हो । गुणस्तरपछि मात्रै मूल्य निर्धारण हुन्छ ।
अहिले बजारमा धेरै सिमेन्ट छन् यसमा अर्घखाची सिमेन्टनै किन प्रयोग गर्ने ?
मानिसले क्वालिटिको कुरा सबैले बुझेको हुँदैनन् । पसलमा पुगेपछि सबैभन्दा पहिला सिमेन्टको मूल्य सोध्छन् । कम्पनी अनुसार प्रतिबोरा १० देखि २० रुपैयाँ मात्रै मूल्य फरक पर्छ । त्यसैले धेरै रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाउँदा थोरै मूल्यमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । पहिलो कुरा त गुणस्तरको लागि अर्घखाँची सिमेन्ट प्रयोग गरिन्छ ।
हामी आफ्नै चुनढुङ्गा खानी र राम्रो गुणस्तरमा नाम कमाएको, विभिन्न ठुला परियोजनामा प्रयोग भइरहेको आधारमा पनि सिमेन्ट छान्न सकिन्छ ।
घर बनाउँदा विज्ञापन हेरेर वा छिमेकीले प्रयोग गरेको सिमेन्टको आधारमा होइन गुणस्तर हेरेर किन्नु पर्छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्टको अबको योजना के छ ?
अहिले १२ सय मेट्रिकटन प्रति दिनको उत्पादन हामीले विस्तार गरेर ३ हजार मेट्रिकटन पुर्‍याउने योजना छ । त्यो बाहेक हामीले ओपिसी सिमेन्ट मात्रै रहेको बजारमा पिपिसी सिमेन्ट पनि बजारमा ल्याइसकेका छौ । यसलाई आगामी दिनमा नेपालको सूदुर पुर्व देखि सूदुर पश्चिम सम्म पुर्‍याउने योजना बनाएका छौं ।
त्यसैअनुसार हामीले डिलरको नेटवर्क बनाएका छौं । संजाल विस्तारको काम धमाधम भइरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ११, २०७६, ००:२८:००